ခုန်ချသေဆုံးမှု – Eleven Media Group
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း တစ်ခန်း၏ ငါးလွှာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံး
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏ ငါးလွှာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ပြုတ်ကျ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၃၀ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။ ပြုတ်ကျ သေဆုံးသည့် အမျိုးသားမှာ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ (၉၄) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် ဦး… (၅၁ နှစ်) ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သြဂုတ် ၂၉ ရက် နံနက် ၆ နာရီခွဲခန့် က ၎င်းနေထိုင်ရာ အမြင့် ၆၀ ပေခန့်ရှိ နေအိမ်တိုက်ခန်း ငါးလွှာ၏ ပြူတင်းပေါက်အနီးတွင် ရပ်နေစဉ် အောက်သို့ ပြုတ်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့နောက် တာဝန်ရှိသူများမှ လာရောက် စစ်ဆေးရာ ဦး… (၅၁ နှစ်) မှာ အတက်ရောဂါ ခံစားနေရသဖြင့် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ အခင်းဖြစ်ချိန်တွင် ပြူတင်းပေါက်၌ ရပ်နေစဉ် ရုတ်တရက် အတက်ရောဂါ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရာမှ တစ်ဆင့်အောက်ရှိ သမံတလင်းပေါ်သို့ ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး ဦး….(၅၁ နှစ်)မှာ ဦးခေါင်းနောက်စေ့ ပေါက်ပြဲ၊ ပါးစပ်၊ နားနှင့်နှာခေါင်းတို့ သွေးထွက် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကာ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ဖြစ်စဉ်ကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်းရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်းအမှတ် (၂၈/၂၀၁၈) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ဆက်လက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
Posted in CrimeTagged ခုန်ချသေဆုံးမှုLeaveaComment on ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း တစ်ခန်း၏ ငါးလွှာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံး
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ်တစ်ခု၏ သုံးလွှာမှခုန်ချရန်ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားအား အမှုဖွင့်
Posted on August 12, 2018 August 13, 2018 by သန့်ဇင်ကျော်
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ်တစ်ခု၏ သုံးလွှာမှ ခုန်ချရန်ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားကို သာကတေမြို့မရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သြဂုတ် ၁၁ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်က သာကေတမြို့နယ် (၄/တောင်) ရပ်ကွက် ရှုခင်းသာလမ်းရှိ ဟိုတယ်တစ်ခု၏ သုံးလွှာ၊ ပြတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့် အမျိုးသားတစ်ဦး ဆူပူသောင်းကျန်းကာ အောက်သို့ ခုန်ချရန်ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အဆိုပါအမျိုးသားမှာ ပြတင်းပေါက်မှ ကျော်ပြီး အောက်ဘက်ရှိ လေကာ ပေါင်တန်းပေါ်တွင် မတ်တတ်ရပ်လျက် အောက်သို့ ခုန်ချရန်ပြုလုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ တားဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့တားဆီးထိန်းသိမ်းပြီးနောက် စစ်ဆေးရာ အဆိုပါ ခုန်ချရန်ပြုလုပ်နေသည့် အမျိုးသားမှာ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၂၀ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် ကို….(၂၉ နှစ်) ဆိုသူဖြစ် ပြီး ၎င်းသည် ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ အဆိုပါ ဟိုတယ်၌ တည်းခိုနေထိုင်နေစဉ် စကားများ ရန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေရန်ပြုလုပ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သဖြင့် ပြတင်းပေါက်မှ ခုန်ချပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေ ရန်ပြုလုပ်သူ ကို…(၂၉ နှစ်) အား သာကေတ မြို့မရဲ စခန်းက (ပ)၆၂၅/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ခုန်ချသေဆုံးမှု, သေကြောင်းကြံLeaveaComment on သာကေတမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ်တစ်ခု၏ သုံးလွှာမှခုန်ချရန်ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားအား အမှုဖွင့်
အလုံမြို့နယ် စက်တွင်းလမ်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ခြောက်ထပ်တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချသေဆုံး
အလုံမြို့နယ် စက်တွင်းလမ်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ခြောက်ထပ်တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချသေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇန်န၀ါရီ ၁၀ ရက် နံနက် ၅ နာရီခန့်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရပ်ကွက်မှ တာဝန်ရှိသူများမှ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ခုန်ချခဲ့သူမှာ စက်တွင်းလမ်း အမှတ် (၅၃) ခြောက်လွှာတွင် နေထိုင်သည့် ကို…(၂၇ နှစ်) ဖြစ်ပြီး နောက်ဖေးလမ်းကြားသို့ ခုန်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“မနက် ၅ နာရီလောက်မှာ သတင်းရလို့ သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ခုန်ချတဲ့သူက အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးပါ။ သူက သူ့ရဲ့နေအိမ် နောက်ဖေးဘက်လမ်းကြားကို ခုန်ချသေဆုံးခဲ့တာပါ” ဟု အလုံမြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ခုန်ချခဲ့သဖြင့် ကို…. (၂၇ နှစ်) မှာ ဦးခေါင်းဝဲဘက်ချိုင့်ဝင်ကြေမွဒဏ်ရာ၊ ၀ဲ/ယာခြေချင်းဝတ်ပွန်းခြစ်ဒဏ်ရာ၊ ပေါင်ပွန်းခြစ်ဒဏ်ရာနှင့် ၀ဲခါးစောင်းပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများ ရရှိကာ သေဆုံးခဲ့ပြီး အလောင်းအား ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ထားပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့က ရပ်ကွက်ထဲမှာနေတာကြာပြီ။ သူတို့နေတဲ့တိုက်နဲ့ သိပ္ပံလမ်းကြားထဲက နောက်ဖေးလမ်းကြားထဲကို ခုန်ချသွားတာပါ။ ဖြစ်ပြီးတော့ ရဲတွေ၊ မီးသတ်တွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက လာစစ်ပြီး ဆေးရုံကားနဲ့ ဆေးရုံကို ခေါ်သွားပါတယ်” ဟု အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်အား အလုံမြို့မရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged ခုန်ချသေဆုံးမှုLeaveaComment on အလုံမြို့နယ် စက်တွင်းလမ်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ခြောက်ထပ်တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချသေဆုံး